I-gShift: Isifundo Samacala ku-SaaS Onboarding Best Practices | Martech Zone
ULwesibili, May 17, 2016 ULwesibili, May 17, 2016 Douglas Karr
Sisebenzisa izinhlelo ezimbalwa zebhizinisi manje. Kuyathakazelisa ukubona umehluko kumasu wokugibela inkampani ngayinye ewenzile. Njengoba ngibheka emuva emlandweni wami embonini ye-SaaS, ngisiza izinkampani ezingaphezu kweshumi ukuthi zithuthukise ukumaketha kwemikhiqizo yazo, ngikholelwa ukuthi ngibone amasu amahle kakhulu futhi amabi kakhulu okugibela.
Okokuqala, ngikholelwa ukuthi kukhona izigaba ezine ezibalulekile kuSoftware njengesevisi yokugibela:
Thumela Ukuthengisa - Kubalulekile ngalesi sikhathi ukuthi izinkampani ze-SaaS zikhombe umugqa wesikhathi, ukuncika, iqembu, nezinhloso zebhizinisi. Ngingancoma umhlangano owamukelekile phakathi kokuthengisa, iklayenti, nethimba lokugibela ukuze kuqinisekiswe ukuthi imininingwane idluliselwa ngokucacile futhi ibhaliwe.
Isingeniso Seplatform - Lokhu kungumgogodla wawo wonke amasu okugibela - lapho abasebenzisi banikezwa khona iziqinisekiso zabo zokungena ngemvume nezinsizakusebenza zemfundo.
Ukuphumelela Kwekhasimende - Umhlinzeki wakho we-SaaS kufanele kube yigunya lakho nochwepheshe embonini, akufundise wena neqembu lakho ngemikhuba namasu amahle kakhulu. Kuyangimangaza ukuthi mangaki amapulatifomu angabasizi empeleni amakhasimende abo ukuthi aphumelele ngaphandle kobungoti babo bangaphakathi.
Impumelelo Yesikhulumi - Ukuba nabasebenzisi nezinsiza ezifundisiwe akwenzi isu eliphumelelayo lokugibela. Ukusebenzisa ipulatifomu le-SaaS kufanele libe umgomo wawo wonke amasu okugibela. Kuze kube yilapho iklayenti lakho liqede umkhankaso walo wokuqala noma lishicilela i-athikili yabo yokuqala, alikenziwa okwamanje. Ukusetshenziswa kuyinto enkulu ekugcinweni kwe-SaaS.
Ngokwesipiliyoni sami, ukugibela amakhasimende amasha kuzo zonke izikhungo eziseduze izakhi ezintathu ezibalulekile:
Ukuphathwa - ukuba neqembu elinekhono nelinegunya lokulungisa izindaba ngesikhathi esifanele njengoba zivela kubaluleke kakhulu empumelelweni. Kumele zihambisane nejubane namandla ekhasimende.
Isikhuthazo - Ukuba nokuxhumana okwamukelekile, okunobungane, nokugcina isinyathelo esisodwa ngaphambi kwamakhasimende akho kwenza kube nesipiliyoni esimangalisayo. Kufanele udonse ngobumnene ikhasimende lakho elisha ekusebenziseni isixazululo sakho ngenkathi usenza inqubo ehlukile.
Ukunika amandla - amaklayenti, ikakhulukazi lawo asezimbonini zokumaketha nezobuchwepheshe, imvamisa anolwazi futhi asebenzise ubuchwepheshe obuningi. Ukuba nezinsizakusebenza zamakhasimende akho zokuziqondisa lapho begibela kuzonciphisa ingcindezi kwabasebenzi bakho futhi kubenze bakwazi ukushayela phambili.
Ukuphuthelwa noma iyiphi yalezi zinto kungaphazamisa impumelelo yokugibela yamakhasimende akho. Kimina uqobo, ngiyakhungatheka lapho ngiphoqeleka ukufanisa ijubane lenkampani ye-SaaS. Uma bephuza kakhulu futhi bengangivumeli ngingene ngaphakathi, ngihlala kuma-webinar bese ngenza sengathi ngilalele. Uma beshesha kakhulu, ngiyakhungatheka futhi ngivame ukuyeka.
Amakhasimende akho anemithwalo yawo yemisebenzi kanye nezithiyo adinga ukuzisebenzisa. Amashejuli wabasebenzi, umsebenzi wansuku zonke, kanye nokuncika kohlelo lwangaphakathi kuvame ukuthinta amandla abo okufakwa kuhlelo lwakho. Izinsizakusebenza zokuzenzela eziguqukayo, kuhlanganiswe nokwesekwa okuthuthukile kwenza inqubo yokugibela ephezulu lapho ikhasimende lingahamba khona ngejubane lalo - imvamisa lisebenza ngokushesha ngezigaba ezithile futhi lihambe kancane kwezinye izikhathi.
Uma ukwazi ukufanisa ijubane labo futhi ugcine isinyathelo esisodwa ngaphambi kwezinselelo zabo, uzokwenza umbono owodwa - umbono wokuqala onawo ngosizo lwakho kanye nengxenyekazi.
Isifundo Samacala ku-Onboarding - gShift
Sibe nobudlelwano obuhle namapulatifomu amaningi we-SEO eminyakeni edlule, kepha eyodwa yagqama njengoba sasiqhubeka nokusebenzela igunya lethu lokuqukethwe amaklayenti… g Shift. Njengoba amanye amapulatifomu atshale imali ukugcwalisa isici ngemuva kwesici sokucwaningwa kwamanani nezikhundla, sibuke njengoba i-gShift iqhubeka nokwenza imodeli yesikhulumi sabo ngendlela abasebenza ngayo abathengisi bedijithali.
Ipulatifomu ye-gShift ikhule isuka kungxenyekazi ye-SEO yaya endaweni yesikhulumi sobukhona bewebhu. Ukuqonda ngamaqoqo wamagama angukhiye, ukusesha kwasendaweni, ukuseshwa kwamaselula, nomthelela emithonjeni yezokuxhumana, nobuhlakani bokuncintisana konke kwenze kwaba yipulatifomu engenamthungo ebesingayisebenzisa kuzakhiwo zethu kanye nakulawo amaklayenti ethu. Sibe abangani nozakwethu… futhi manje singamakhasimende we-gShift futhi bangamakhasimende ethu!
Uma ufuna ukubona ukugibela okwenziwe kahle, ungabheki ukudlula i-gShift. Nganikezwa umphathi we-akhawunti, ukufinyelela, kwase kuthi zonke izinsizakusebenza ebengizidinga ukwenza ngezifiso futhi ngingenise amaklayenti ethu esikhululweni sawo. Nakhu ukuphumula:
Isikhungo Sosizo se-gShift - Kufaka phakathi imihlahlandlela yokuqalisa, Usebenzisa izinkombandlela ze-gShift, imihlahlandlela ye-Agency, Imibiko yamagama angukhiye, ama-Beacons namaDashibhodi, i-kontextURLs Guide, Ukuhlolwa Kwesiza, Ukuhlanganiswa, Ukuvuselelwa Komkhiqizo, kanye Nezinsizakusebenza Zokuqeqesha.
Imihlahlandlela Yezimboni ye-gShift - Ukusetshenziswa kwepulatifomu kuyingxenye eyodwa kuphela yesibalo. Ukuqinisekisa impumelelo yamakhasimende kuyinjongo enkulu - ngakho-ke i-gShift inikeza imihlahlandlela kuzo zonke izici zokusesha nokwenza kahle okuqukethwe.
Izinsizakusebenza Zomphakathi ze-gShift - Ngaphezu kweziqondisi, i-gShift iqophe ama-webinars, amavidiyo, ama-podcast, ama-ebook, amashejuli wokuqeqeshwa komsebenzisi kanye nezibuyekezo zokukhishwa komkhiqizo. Leli isu elihlukile, elihlinzeka ngezinsizakusebenza kumakhasimende ngokuya ngokuthanda kwawo.
Iziteshi ze-gShift Social - Uma lokho kunganele, i-gShift ibuye ibe nebhulogi evelele futhi esebenzayo nomphakathi okhulayo womphakathi kuwo wonke amapulatifomu ezenhlalo.
Umphumela womzamo owenziwe kulezi zinsiza zokugibela ukhokhele. I-gShift iyaqhubeka nokuhola imboni kukho konke ukwaneliseka kwamakhasimende nokugcinwa namakhasimende abo ngokuqhubekayo enikeza impendulo yokuthi ukungena ebhodini kwakulula kakhulu futhi kushesha kakhulu kunabancintisana nabo.
I-gShift izokusiza ukuphatha bonke ubukhona bewebhu bomkhiqizo wakho, ukuncintisana kwethrekhi, ukulandelela okuqukethwe okungekho kusayithi kanye nemikhankaso yokukhangisa enomthelela, ukuqapha izimpawu zomphakathi, ukukala ukusebenza kokuqukethwe, nokwenza ucwaningo. Siyaziqhenya ngokudalula nokuthi siyasebenza nathi.
Bhalisela i-Demo ye-gShift
Tags: Imihlahlandlela ye-ejensiAma-Beacons namaDeshibhodiimikhuba engcono kakhuluimihlahlandlela yokuthengisa okuqukethweizinsiza zokumaketha okuqukethweebooksImihlahlandlela yokuqalisai-gshiftamalebhu we-gshiftimikhombandlela yomkhakhaUkuhlanganiswaImibiko yamagama asemqokaUmhlahlandlela we-kontextURLslokubonisaAma-podcastsizibuyekezo zokukhishwa komkhiqizoUkuvuselelwa Komkhiqizoama-webinars aqoshiweama-saas egibelaimihlahlandlela yomkhakha wokuseshaseo blogseo ukuqeqeshwaizinsiza zokuqeqesha lokhoUkuhlolwa KwamasayithiIzinsiza Zokuqeqeshaamashejuli wokuqeqeshwa kwabasebenzisiKusetshenziswa imihlahlandlela ye-gShiftvideos